निर्वाचन आयोगलाई राजनीतिक दलहरुको सुझाव - १७ पुष २०२६, बिहीबार ००:००, Purbodaya FM
निर्वाचन आयोगलाई राजनीतिक दलहरुको सुझाव
बिहिबार २९ भाद्र २०७४ इटहरी न्युजडेस्क-
राजनीतिक दलहरुले आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन खर्च व्यवहारिक र स्वभाविक हुनेगरी निर्धारण गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन।
राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन खर्च बढाउने पक्षमा आफूहरु नरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन। बिहीबार निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको खर्च निर्धारणको विषयमा सुझाव लिन आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले निर्वाचनको खर्च बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था आदिलाई पनि ध्यानमा राखेर निर्वाचनको खर्चको सीमा तोक्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ। रिजालले निर्वाचन खर्च निर्धारण गर्दा कार्यान्वयनको पक्षमा विशेष निगरानी राख्न पनि आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । नेकपा एमालेका नेता अग्नी खरेलले निर्वाचन खर्चलाई व्यवहारिक र स्वभाविक बनाउन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिनुभयो।
नेता खरेलले निर्वाचन खर्च कम गर्दै लानुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू पार्टी दृढ रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले निर्वाचन खर्च अधिक हुने गरेकोतर्फ पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो।
त्यसैगरी नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका नेता नवराज सुवेदीले आफ्नो पार्टी जनमतको आधारमा राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। निर्वाचन आयोगले भने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका उम्मेदवारका लागि १४ लाख खर्च गर्न पाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले प्रति मतदातासँग हुने खर्चलाई बजार मूल्यसँग समायोजना र मुद्रा स्फितिलाई मूल आधार बनाएर प्रस्तावित निर्वाचन खर्च तय गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको भूक्षेत्र बढकोले पनि निर्वाचन खर्च केही बढन गएको पनि स्मरण गराएको छ। निर्वाचन आयोगले २०७० सालको संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले १० खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा हुने खर्चको सीमा
तोक्न पाउने व्यवस्था छ।
सोही व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक दलहरुकै सुझावको आधारमा खर्च निर्धारणको कामलाई टुंगोमा पुर्‍याउन लागिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आगामी मंसीर १० र २१ गते २ चरणमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुँदैछ।
२९ भाद्र २०७४, बिहीबार १२:०८ मा प्रकाशित